क्रिकेट खेलिरहेका बेला बुवाकाे मृत्युले बिक्षिप्त भएका क्रिकेटका ‘हल्क’ | Neplays.com
सन् २०१५ को एक दिन मार्कस स्टोइनिसलाई दिउँसोको उडानमार्फत क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भारत जानुपर्ने थियो । त्यसको अघिल्लो दिन राती उनका क्यान्सर पीडित बुबा क्रिस अधिक मध्यपानपछि जलवियोजनका कारण कमजोरी भएर लड्न पुगे । ६ घन्टापछि स्टोइनिस, उनकी बहिनी र आमाले ६ घन्टापछि बाबुलाई नाक फुटेर रगतपच्छे अवस्थामा भेट्टाए ।
‘मैले २ घन्टा अस्पतालमा बुबासँग बिताएँ, त्यसपछि घर गएँ झोला प्याक गरेँ र त्यही दिउँसो भारतका लागि उडेँ । शतप्रतिशत म भारत जान चाहँदिनथेँ, म विमान चड्नै चाहदिनथेँ । तर मलाई यो थाहा थियो कि यदि म गएँ भने मेरो लागि अधिक फाइदा हुनेवाला छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा राम्रो प्रदर्शन गरेँ र आफूलाई धेरै हदसम्म सावित गरेँ । जव कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्छ तपाईको क्षमताको पनि परीक्षा हुन्छ । जस्तो मैले महशुस गरेको थिएँ,’ गएको अप्रिलमा स्टोइनिसको पुरानो बिद्यालयले सन्चालन गरेको पोडकास्टमा उनले आफ्नो अनुभव बाँडेका थिए ।
उनीसँग आफ्ना पिताका यस्ता धेरै महत्वपूर्ण क्षणहरु सम्झनामा छन्, जो करिव एक दशकसम्म क्यान्सरसँग जुधेर सन् २०१७ को नोभेम्बरमा सधैंका लागि अस्ताए । स्टोइनिस घरेलु खेल खेलिरहेका थिए । त्यतिबेला उनका नातेदार आएर बाबुको मृत्युको खवर सुनाए । स्टोइनिस मैदानमै बेहासजस्तो बने । तत्कालै टिममेट एडम जाम्पाले उनलाई अंकमाल गरे र बाउन्ड्रीबाहिर शान्तसँग आधा घन्टा राखे ।
उनका पिता, उनका नायक । जसले स्टोइनिसको करिअरलाई एउटा आकार दिए । क्रिकेटलाई माया गर्न सिकाए । जसले उनलाई खेल मनोबैज्ञानिकसँग भेट्र्टा । करिअरलाई अगाडि बढाउन अर्को राज्यमा बसाइ सार्न सहयोग गरे ।
स्टोइनिसले १९ वर्षको उमेरमा पश्चिम अस्ट्रेलियाको टिमबाट डेब्यू गरेका हुन् । एक वर्षभन्दा बढी टिमका लागि खेलेका उनले आफ्नो सम्झौता गुमाए । उनले सन् २०१२ मा पितासँग भने कि अब केहि गर्नुपरयाे । पिताले दृश्यमा बदलावको सुझाव दिए ।
लगत्तै यी बाबुछोरा दक्षिण अस्ट्रेलियाको टिममा सम्भावना खोज्दै एडिलेड पुगे । जहाँ पहिलो श्रेणीका खेलडी डरेन बेरी प्रशिक्षक थिए । स्टोइनिसलाई भनियो नि उनी पहिलो श्रेणीको प्रशिक्षण लिन सक्षम छन् तर तत्कालै अनुबन्ध गर्न सकिँदैन ।
त्यसपछि बाबुछोरा कोठाबाट निस्किए । दुवैले एकछिन हेराहेर गरे । बुबाले निराशा व्यक्त गर्दै भन्नुभो, ‘तिमीले एडिलेड बस्न नपाउने भयौ,’ स्टोइनिसले पोडकास्टमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि बुबाले सोध्नुभयो अब कहाँ जाने त ? मैले भने– कि सिड्नी नभए मेलवर्न । उनीहरु मेलवर्न पुगे र भिक्टोरियामा अनुबन्ध भए । यो निर्णय उनको करिअरमै निर्णायक बन्यो ।
‘ए.. तिमीले क्रिकेटमा केहि गर्न सक्दैनौ…., त्यो एउटा जिमको निजी प्रशिक्षक बन्दैछ…, त्या बिश्वबिद्यालय जाँदैछ र पैसा खर्च गर्दैछ…’ करिअरको सुरुआतका क्रममा आफूलाई लक्षित गरी कानमा गुन्जिने यस्ता बाक्यहरुका लागि एक दशकपछि स्टोइनिसको प्रतिक्रिया यस्तो छ, ‘म भगवानको कसम खान्छु कि ती वाक्यहरु मलाई अहिले पनि सम्झनामा छन् । म अहिले पनि ती कुराहरुलाई प्रेरणाको रुपमा उपयोग गर्छु,’ स्टोइनिस मुस्कुराउँछन् ।
यी कुराहरु प्रश्न गर्ने दुईलाई मात्र होइन ती हरेक बालबालिकाका लागि अनुकुल हुनुसक्छ । वास्तवमा पोडकास्टको लक्षित दर्शक पनि स्कुले बच्चाहरु नै हुन् जहाँ स्टोइनिसले आफ्नो मन्त्र बाँड्नेछन् ।
‘यदि तपाई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने कसैलाई पनि नभन्नुहोस कि तपाई प्रतिस्पर्धी हो ।’ यो कुरा उनले करिअरको सुरुआती वर्षहरुमा धेरै सुनेका रहेछन् । उनले यो पनि देखेका छन् कि सबै सफल व्यक्तिहरुले प्रतिस्पर्धाको हल्ला गरेनन् । तर उनीहरुसँग असीमित प्रतिस्पर्धा थियो । ‘म सधैं जित्न चाहन्छु, म सधैं सक्रिय हुन चाहन्छु, त्यो म नै हुँ ।’
मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्ने कुरालाई स्टोइनिसले कति ध्यान दिन्छन्, ‘शतप्रतिशत’ उनका मनोबैज्ञानिक डेभ डिग्लेले भने, जो बेलायती मनोबैज्ञानिक हुन् र त्यसभन्दा अगाडि उनी ब्रिटेनका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्न्यास्टिक खेलाडी थिए, ‘मार्कशका पिताले मलाई टेलिभिजनमा देखेका रहेछन र यहाँ झिकाइहाले । म उनीसँग करिव एक दशकदेखि छु । सायद उनी भिक्टोरिया सरेदेखि ।
एक हतार मनस्थिति र सुस्त करिअरका कारण मानिसको जीवन पछाडि धकेलिदिन्छ, थाहा नै हुँदैन कि उ के चाहन्छ । स्टोइनिससँग यस्ता दुइवटा लामो निराशाजनक चरण रह्यो । पहिलो उनी पश्चिम अस्ट्रेलियाको अनुबन्धबाट बाहिर थिए । त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म उनी कुनै पनि सम्झौताबाट बाहिर भए अर्थात क्रिकेट खेल्न सकेनन वा भिक्टोरियाको मुख्य टिमबाट प्रशिक्षण लिन पाएनन् । स्टोइनिस भन्छन्, ‘त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय थियो । त्यतिबेला मैले पहिलोपल्ट कुनै कुरालाई मानसिक पक्षबाट विश्लेषण गर्न थालेँ ।’
लक्ष्य निर्धारणको समयमा उनले किन एक सफल क्रिकेटर बन्न चाहे, उनको मूल मूल्य के थियो, उनी जीवनमा के चाहन्थे ? ‘मैले क्रिकेट खे्रल्न थालेको १२ वर्ष भयो । तपाईसँग जव एउटा दृढ मानसिकता हुँदैन तव तपाई आफ्नो बाटो बिराउनुहुन्छ । मलाई त्यो समयले धेरै कुरा सिक्ने अवसर दियो । सायद म त्यतिबेला कतै हराएको थिएँ त्यस्तो अवस्थामा म कहिल्यै पुगेको थिइनँ, तर मेरो लागि त्यो सुखद अन्त्यको रुपमा रह्यो ।’
स्थिरताको कमीकै कारण स्टोइनिसको करिअर धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । ‘अस्थिरता के हो ? किनभने अधिकांश प्रदर्शन भावनात्मक रुपमा गरिन्छ,’ मनोबैज्ञानिक डिग्ले थप्छन्, ‘हामीले उनको प्राकृतिक व्यवहारको देख्यौं र त्यहीअनुसारको ढाँचा निर्माण गर्यौं । त्यसैले तपाईले मैदानमा एक तीव्र इच्छाशक्ति भएको खेलाडी देख्न पाउनुहुन्छ ।’
जव स्टोइनिस ब्याट्सम्यानको रुपमा पूर्ण लयमा हुन्छन् तव थाहा हुन्छ कि उनी कस्तोसम्म बन्न सक्छन् । जस्तो कि उनले एकदिवशीय खेलमा न्युजिल्यान्डबिरुद्ध १४६ रन बनाएका थिए । त्यसबाहेक बिगबास लिग र आईपीएलका केहि इनिङ्सहरुमा पनि उनले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् ।